မီးဘေးအမှု. . . အစဉ်သတိပြုကြပါ | NPE
မီးဘေးအမှု. . . အစဉ်သတိပြုကြပါ
နွေရာသီရောက်လာသည့်အခါ နွေကာလ၏ ပူပြင်းမှု နှင့်အတူ ယူဆောင်လာတတ်သည်က ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ မီးသတ်ဥဩသံစူးစူး ဖြစ်လေသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အစပိုင်းတွင်လည်း မီးသတ်ကား၏ဥဩဆွဲသံကို ဟိုမှ၊ သည်မှကြားရစ ပြုလာပြီဖြစ်၏။ သတင်းဌာနတစ်ခုမှ ကြေညာချက်အရ ယခုနှစ်၏ပထမ သုံးလပတ်ဖြစ်သည့် ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီနှင့် မတ်လအတွင်း မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးရသည့် ငွေကြေးပမာဏမှာ ငွေကျပ်သန်း ၃၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး ယင်းပမာဏသည် ယမန်နှစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်ထက် ကျပ်သန်း ၁၆၀၀ ကျော်ပိုသည်ဟု ဆို၏။ မတ်လတစ်လအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့် အကြိမ်ရေမှာ ၃၅၀ ကျော်ရှိကြောင်း ကြားသိလိုက်ရ၏။
မီးလောင်ခြင်းဖြစ်ပွားရသည့် အရင်းခံအကြောင်း များကို ကြည့်ရှုပါက ပေါ့ဆမီး၊ ရှို့မီးနှင့် သဘာဝ အလျောက် လောင်ကျွမ်းသည့် သဘာဝမီးဟူ၍ ခွဲခြား နိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ သဘာဝမီးဆိုသည်က သစ်တောကြီးများအတွင်း အများဆုံးဖြစ်ပွားပြီး ပူပြင်း ခြောက်သွေ့သည့် ရာသီများ၌ သစ်ပင်အချင်းချင်း ပွတ်တိုက်မိရာမှစ၍ လောင်ကျွမ်းသည့်မီး ဖြစ်ပါ၏။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၌ လနှင့် ချီ၍လောင်ကျွမ်းသည့်တောမီးကို သတိထားမိကြလိမ့် မည်ထင်ပါသည်။ သဘာဝသစ်တောများ ထောင်ပေါင်း များစွာ မီးသင့်ပျက်စီးရသည့်အပြင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ပေါင်း အများအပြား သေဆုံးခဲ့ရသည်။ တောမီးများ လောင်ကျွမ်းသည့်အခါ ဆိုးရွားသည့်အချက်ကား မီးငြှိမ်း သတ်ရန်ခက်ခဲပြီး မီးလောင်သည့် ကာလရှည်ခြင်းပင်။ တောမီးများသည် သဘာဝအလျောက်လောင်ကျွမ်းသည် ဆိုသော်လည်း သစ်တောများအတွင်း မီးဖိုပြီး စနစ်တကျ မငြှိမ်းသတ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဆေးလိပ်မီးကဲ့သို့သော မီးစများ ကို စည်းကမ်းမဲ့စွာစွန့်ပစ်တတ်သည့် လူအချို့၏ ပေါ့ဆ မှုကြောင့် တောမီးလောင်ကျွမ်းရသည်မျိုးလည်း ရှိပါ၏။
ရှို့မီးဆိုသည်က လူတို့၏ပယောဂဖြင့် မီးလောင် ကျွမ်းစေရန် ဖန်တီးထားခြင်းမှအစပြု၍ လောင်ကျွမ်း ရသည့် မီးဖြစ်သည်။ မိမိတို့ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်က မြို့အသီးသီးရှိ ဈေးကြီးများ၌ ပြည်သူ့ပစ္စည်း ကော်ပို ရေးရှင်းဟု ခေါ်ဝေါ်သော ပပက အစိုးရဆိုင်များရှိပါ၏။ စာရင်းစစ်ဝင်ချိန်၌ ထိုပပကဆိုင်အချို့တွင် စာရင်း ဖျောက်ရန်အတွက် ဆိုင်အတွင်းလောင်စာများ ဖန်တီး ထားရှိကာ မီးလောင်စေရန် လုပ်ဆောင်ထားတတ်ပါသည်။ ထိုအချိန်အခါမျိုး၌ မီးသတ်ဝန်ထမ်းများက အထူးကြပ်မတ် ၍ စစ်ဆေးကြရသည်ကို သတိရမိပါ၏။
သူတစ်ပါး အတိဒုက္ခရောက်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး လူနေ ထူထပ်သည့်ရပ်ကွက်များအတွင်း မီးကွင်းပစ်ခြင်းသည် လည်း ရှို့မီးအမျိုးအစားတွင် ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် လင်မယားချင်းရန်ဖြစ်၍ နေအိမ်ကိုမီးရှို့ခြင်း၊ မူးယစ်ရမ်းကား၍သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဝေဒနာကြောင့် သော်လည်းကောင်း နေအိမ်အဆောက်အအုံများကို မီးတင် ရှို့ခြင်းသည်လည်း ရှို့မီးအမျိုးအစားပင် ဖြစ်ပါ၏။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရခြင်း အကြောင်းရင်းများ၌ အကြိမ်ရေအများဆုံးမှာ မီးပေါ့ဆ၍ လောင်ကျွမ်းရသည့် ပေါ့ဆမီး အမျိုးအစားဖြစ်ပါ၏။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် တွက်ပါ က ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဖယောင်း တိုင်မီး၊ မီးခွက်မီး၊ မီးသွေးမီးဖို၊ ထင်းမီးဖိုနှင့် လျှပ်စစ်မီးဖိုများ အသုံးပြုထားပြီး အကြောင်းအမျိုမျိုးကြောင့် ငြှိမ်းသတ်ရန် မေ့လျော့သွားရာမှ လောင်ကျွမ်းရသည့်မီးမှာ ပေါ့ဆမီး အမျိုးအစားဖြစ်ပါ၏။ ဘုရားမီးထွန်းသည့် ဖယောင်းတိုင်မှ ကူးစက်သောမီးနှင့် ဖယောင်းတိုင်ထွန်း စာဖတ်ရင်း အိပ်ပျော်သွားရာမှ လောင်သည့်မီး၊ ကလေးသူငယ်များ ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ရာမှတစ်ဆင့် လောင်သောမီး တို့သည်လည်း ပေါ့ဆမီးများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ယခုနောက်ပိုင်း၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးများ လာကြသည်ဖြစ်ရာ ရေခဲသေတ္တာ၊ ပန်ကာ၊ အဲကွန်းစသည် တို့တွင် အပူလွန်ကဲပြီး မီးလောင်ကျွမ်းတတ်ပါသည်။ နေအိမ်များ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှု များပြားလာသည်နှင့်အမျှ သွယ်တန်းထားသည့် လျှပ်စစ် မီးကြိုးများ၏ ခံနိုင်ဝန်အားကို သတိမမူဘဲ ရေစက်မောင်း၊ ထမင်းဟင်းချက်၊ အဲကွန်းအသုံးပြုမှုများကို တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်ကြရာ မီးကြိုးများလိုင်းပူးကာ ဝိုင်ယာရှော့ ဖြစ်ရာမှအစပြု၍ မီးလောင်ကျွမ်းမှု အများဆုံးဖြစ်လေ့ ရှိပါသည်။
ယခုကာလ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုများမှာ တောရော မြို့ပါ ပိုမိုများပြားလာသည့်အလျောက် လျှပ်စစ် မီးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို ဗဟုသုတ အနေဖြင့် ဆည်းပူးထားသင့်ကြပါသည်။ ပထမအဆင့် အနေဖြင့် မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို လည်းကောင်း၊ ရပ်ကွက်အလိုက်၊ လမ်းအလိုက် တာဝန် ကျသည့် လျှပ်စစ်ဌာနဝန်ထမ်း (Line man) များ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းကောင်း ရယူထားသင့်ပါသည်။
မိမိအတွေ့အကြုံအရ မိမိတို့နေအိမ်၌ လျှပ်စစ်မီး နှင့်ပတ်သက်၍ သံသယရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ ဝန်ထမ်းများ အလျင်အမြန်ရောက်ရှိ လာကာ ကြည့်ရှုပြင်ဆင်ပေးပါသည်။ အိမ်သွယ်လျှပ်စစ် မီးသုံးစွဲပုံစနစ်နှင့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို စစ်ဆေး ပေးခြင်း၊ ပညာပေးပြောကြားချက်များ ဆောင်ရွက်ပေး ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဝိုင်ယာကြိုးများ တစ်စုံတစ်ရာ ရှော့ဖြစ်၍ ရုတ်တရက်မီးထလောင်ပါက မီးသတ်ဆေး ဘူးဖြင့် ငြှိမ်းသတ်ခြင်း၊ ရေဖြင့်ပက်မည့်အစား ရေစို အဝတ်ဖြင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှအုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မီးငြှိမ်းသတ် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်တို့ကို ရှင်းပြပေးပါသည်။
မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ပညာပေးဆောင်ပုဒ်များတွင် “သင့်ကြောင့်မီးမလောင်ပါစေနှင့်”၊ “လူခိုးတော့ အစုတ် ကျန် မီးခိုးတော့ အပြုတ်နှံ’’ စသည်များကို လူတိုင်း လိုလို ဖတ်ဖူးကြပါလိမ့်မည်။ လူတစ်ယောက်၏ ပေါ့ဆမှု ကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားပါက ထိုလူတစ်ဦးတည်း သာ ဆုံးရှုံးရသည်မဟုတ်ဘဲ အများစုပါ အတိဒုက္ခ ရောက်ကြရပါသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုသည် ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ဖြစ်လျှင် အများပါ ရောနှောပြီး ခံရမည့် ယခုကာလတစ်ကမ္ဘာလုံး၌ ကျရောက်နေသော ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါဆိုးသဖွယ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်တစ်အိမ်၌ သူခိုးဝင်၍ခိုးလျှင် အနည်းဆုံးတော့ တချို့ တစ်ဝက် ကျန်ကောင်းကျန်မည်ဖြစ်သော်လည်း မီးလောင်ပါကမူ အဝတ်စုတ်မျှပင် ကျန်တော့မည် မဟုတ် ပေ။ ယခုခေတ်ကာလ၌ အိမ်တစ်လုံးအဖြစ် ပြန်လည် ထူထောင်ဖို့အရာသည် မည်မျှခက်ခဲသည်ကို တွေးကြည့် ရုံနှင့်ပင် သိနိုင်ပါ၏။ သို့ဖြစ်ပေရာ မီးလောင်ကျွမ်းမှု အလွယ်တကူဖြစ်ပွားသွားနိုင်သည့်၊ ကဲကဲဆတ်မခံသည့် ယခုလို ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီမျိုး၌ သင်၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် မီးမလောင်ပါစေနှင့်ဟု အလေးထား သတိပေးလိုက်ရကြောင်းပါဗျာ။ ။